39 Afei wɔde ahama bruu, tankɔkɔɔ, ne koogyan+ nwenee ntade+ a wɔde bɛsom wɔ kronkronbea+ hɔ. Enti wɔpam ntade kronkron+ maa Aaron, sɛnea Yehowa hyɛɛ Mose no. 2 Ɔde sika, ahama bruu, tankɔkɔɔ, koogyan ne nwera nwenee nguguso.+ 3 Afei wɔboroo sika kɔkɔɔ ma ɛyɛɛ tratraa, na otwitwaa no nteaanteaa de kaa ahama bruu, tankɔkɔɔ, koogyan ne nwera ho nwenee.+ 4 Wɔyɛɛ ade totoo ne mmati so na wɔka sii anim. 5 Wɔde sika kɔkɔɔ, ahama bruu, tankɔkɔɔ, koogyan ne nwera no ara bi nso nwenee abɔso a wɔde bɛkyekyere,+ sɛnea Yehowa hyɛɛ Mose no. 6 Afei wɔfaa sohambo+ a wɔde sika kɔkɔɔ afa ho kurukyerɛw Israel mma din wɔ so+ sɛnea wɔkyerɛw nsɔano so. 7 Na ɔde sisii atade no mmati so sɛ ɛnyɛ nkae+ abo mma Israelfo, sɛnea Yehowa hyɛɛ Mose no. 8 Afei ɔde sika kɔkɔɔ, ahama bruu, tankɔkɔɔ, koogyan ne nwera nwenee nkatabo,+ te sɛ nguguso+ no. 9 Sɛ wɔka nkatabo no to so a, ɛyɛ ahinanan. Bere a wɔaka ato so no, ne ntwemu yɛ nsateakwaa akron na ne tɛtrɛtɛ nso yɛ nsateakwaa akron.+ 10 Wɔde abohene tetaree mu yɛɛ no nsãso anan. Nsãso a edi kan no yɛ aboɔdenbo kɔkɔɔ ne akraatebo ne ahabammonobo.+ 11 Nsãso a ɛto so abien+ no yɛ nsrammabo ne hoabo+ ne ahwehwɛbo.+ 12 Nsãso a ɛto so abiɛsa+ no yɛ lesembo ne mfrafraebo ne beredumbo. 13 Nsãso a ɛto so anan+ no yɛ sikaberebo ne sohambo+ ne yasepebo. Na wɔde sika kɔkɔɔ totoo anoano. 14 Wɔkyerɛw Israel mma dumien no din wɔ abo no so. Wɔkyerɛw no sɛnea wɔkyerɛw nsɔano so, na edin a ɛwɔ ebiara so no gyina hɔ ma Israel mmusua dumien+ no mu biako. 15 Wɔde sika amapa nwenee ntweaban wɔ nkatabo no so sɛ ahama.+ 16 Wɔde sika kɔkɔɔ yɛɛ nnuraho abien ne nkawa abien, na wɔde nkawa abien no hyehyɛɛ nkatabo no ntwea abien no so.+ 17 Afei wɔde nhama abien a wɔde sika kɔkɔɔ ayɛ no hyehyɛɛ nkawa abien no mu wɔ nkatabo no ntwea so.+ 18 Na wɔde nhama abien ano a aka no hyehyɛɛ ade a ɛda nguguso no mmati abien so no mu wɔ atade no anim.+ 19 Afei wɔde sika yɛɛ nkawa abien hyehyɛɛ nkatabo no ase ma ɛdaa nguguso no so.+ 20 Na wɔde sika kɔkɔɔ yɛɛ nkawa abien hyehyɛɛ ade abien a ɛda nguguso no mmati so no ase wɔ atade no anim wɔ ɛrekɔ ne ntoae so, abɔso no so.+ 21 Afei wɔde ahama bruu hyehyɛɛ nkawa no mu kyekyeree nkatabo no bɔɔ nguguso no mu wɔ abɔso no so, sɛnea ɛbɛyɛ a nkatabo no remfi nguguso no so, sɛnea Yehowa hyɛɛ Mose no.+ 22 Afei ɔde ahama bruu nkutoo nwenee asɔfotade nsasin+ no. 23 Wotwaa asɔfotade nsasin no kɔn wɔ ne mfinimfini te sɛ akotade. Na wɔnwenee ano hyiae sɛnea ɛrentew.+ 24 Wɔde ahama bruu ne tankɔkɔɔ ne koogyan nwenee granate akutu sensɛn ano hyiae.+ 25 Afei wɔyɛɛ sika adɔmma hyehyɛɛ granate akutu+ no ntam de faa asɔfotade nsasin no ano hyiae; 26 Enti granate akutu biara akyi no, sika adɔmma di hɔ; edidi so wɔ asɔfotade nsasin a wɔde bɛsom no ano hyia,+ sɛnea Yehowa hyɛɛ Mose no. 27 Afei wɔde nwera nwenee atade tenten+ maa Aaron ne ne mma, 28 na wɔde nwera no bi nwenee abotiten+ ne abotiri+ fɛfɛ ne nwera twakoto,+ 29 na wɔde nwera ne ahama bruu ne tankɔkɔɔ ne koogyan nwenee abomu,+ sɛnea Yehowa hyɛɛ Mose no. 30 Afei wɔde sika amapa yɛɛ ade tratraa hyɛnn bi, na wɔde yɛɛ ahosohyira sɛnkyerɛnne kronkron kurukyerɛw so sɛnea wɔkyerɛw nsɔano so sɛ, “Kronkron ne Yehowa.”+ 31 Na wɔde ahama bruu soo mu de bɔɔ abotiten no anim,+ sɛnea Yehowa hyɛɛ Mose no. 32 Enti afei ahyiae ntamadan kronkron no ho adwuma nyinaa baa awiei, na Israelfo no yɛɛ nea Yehowa hyɛɛ Mose no+ nyinaa. Wɔyɛɛ saa pɛpɛɛpɛ. 33 Wɔde ntamadan+ no brɛɛ Mose, ntamadan+ no ne ɛho nneɛma,+ ɛho mpɛɛwa,+ ɛho nnua+ ne ne mmeamu,+ ɛho adum ne ne nnyinaso,+ 34 ne nkataso a wɔde adwennini nhoma a wɔahyɛ+ no kɔkɔɔ ayɛ, ne nkataso foforo a wɔde sukraman nhoma+ ayɛ, ne ntwamutam a ɛsɛn hɔ,+ 35 ne adanse adaka+ ne nnua+ a wɔde soa ne ne mmuaso,+ 36 ne ɔpon+ ne ɛho nneɛma+ nyinaa ne paanoo a wɔde ba Onyankopɔn anim, 37 ne sika kaneadua+ ne akanea, kyerɛ sɛ akanea a ɛsesa so no,+ ne ɛho nneɛma+ nyinaa, ne ngo a wɔde begu mu,+ 38 ne sika afɔremuka+ ne ɔsrango+ ne aduhuam+ ne ntama a ɛsɛn ntamadan no ano,+ 39 ne kɔbere afɔremuka+ ne kɔbere nkantankantan+ a ɛda so, ne nnua a wɔde bɛsoa+ ne ɛho nneɛma+ nyinaa, ne ɛsɛn+ no ne ne nnyinaso,+ 40 ne ntama a ɛsensɛn adiwo hɔ,+ ne n’adum+ ne ne nnyinaso,+ ne ntama a ɛwɔ adiwo no kwan ano,+ ne ɛho ntampehama,+ ne ɛho mpɛɛwa,+ ne ɛho nneɛma+ nyinaa a wɔde bɛyɛ ahyiae ntamadan kronkron no mu adwuma, 41 ne ntade+ a wɔanwene a wɔde bɛsom wɔ kronkronbea hɔ, ntade kronkron+ a wɔapam ama ɔsɔfo Aaron ne ne mma a wɔde bɛsom sɛ asɔfo.+ 42 Israelfo no yɛɛ adwuma no nyinaa, sɛnea Yehowa hyɛɛ Mose no.+ 43 Na Mose hwɛɛ adwuma no nyinaa, na ohui sɛ wɔayɛ no sɛnea Yehowa hyɛe no pɛpɛɛpɛ. Ɛnna Mose hyiraa wɔn.+